indlela yokwenza ama-pellets otshani,ukwenza ama-pellets otshani kaphethiloli noma okuphakelayo kwezinkukhu
lo umbala wethu omusha oluthuthukisiwe onsundu isigaxa se-pellet ezingakwazi ukucubungula okusanhlamvu njengokudla kommbila .sunflower sakusihlwa, isidlo sikakolweni, isidlo sakusihlwa ,isidlo sikashukela nokunye,
le umshini wepellet isetshenziselwa ikakhulukazi ukwenza ama-pellets okondla izilwane, yenkukhu, idada, imvu, izinkomo, futhi muhle nokulala kahle, umshini wokuphaka i-feed pellet ungacubungula usayizi we-pellets wokugcina kusuka 2 ama-micrometer to 10 ama-micrometer , umshini wokwenza ama-pellet nawo ungasebenza nge-sawdust eyenziwe ngokhuni ethambile,
umswakama udinga ku- 6% ukuze 10%, futhi izinto zokusetshenziswa zomshini wokwenza i-pellet kumele zibe kwifomu le-powder.
umshini owenza i-pellet ulungele ukusetshenziswa kwasendlini nokusetshenziswa kwezinkukhu ezincane kwepulazi kanye nokusetshenziswa kwepulazi lezinkukhu eliphakathi,
umkhiqizo wethu wokukhiqiza umshini uhlela kusuka 30 kilo amagremu ku- 2000 amagilo kilo , ungakhetha kalula phakathi kwale mishini, futhi sikunikeza nezingxenye ezisele noma kunini ukuze uqinisekise ukuthi umshini wakho usebenza kahle.
Sizinikela ngokuqinile ekunikezelweni kwezinsizakalo zesikhathi nasekusetshenzisweni okuhle kakhulu kumkhiqizo ngamunye esiwuthola kuphi emhlabeni. kanjalo, Ukuthuthuka njalo kwezinsizakalo nekhwalithi kungumsebenzi wethu omkhulu wazo zonke izisebenzi ezikule nkampani
Udweshu bekulokhu kusetshenziswa njengombhede wamahhashi. Muva nje, ubuchwepheshe obusha busivumele ukuthi sithuthukise obekubonakala ngathi sekuphelelisiwe, ukuthi yenze ama-pellets athambile kusuka otshanini bese uyawasebenzisa endaweni yokubeka. Kudala kwaziwa isikhathi eside ukuthi ama-pellets otshani ayizimbhede ezinhle kakhulu zamahhashi.
Ukuchama kwe-urine kuthambile ama-pellets otshani kuhle kakhulu, kanjalo ne-ammonia ne-odor control. Imfucumfucu futhi iphansi njengoba kudinga kuphela ukukhipha imibhede emincane nsuku zonke. Olunye ucwaningo luphawula ukuthi le ndlela inciphisa utshani ukusetshenziswa ngesigamu. Ngenxa yalokhu kudingeka umsebenzi omncane.
Ngokuvamile kuyiqiniso ukuthi izindleko ze ama-pellets otshani ngoba umbhede uphakeme… kulapho ungaqala ukucabanga ngathi isigaxa se-pellet… Uma ungumsebenzisi we-pellet wotshani ungaqala ukwenza owakho ama-pellets otshani kusuka otshanini bakho bese ubatholela izindleko zokukhiqiza kuphela. Lokhu kuzokusiza ukuthi ukwazi okungcono kakhulu emahhashini akho ngaphandle kokujula kakhulu kwisabelomali sakho.
Ngakolunye uhlangothi uma unotshani obukhona ungakhiqiza izimbotshana zotshani zokulala yamahhashi bese uzithengisa ngqo kubagcini bamahhashi ngenzuzo emangalisayo.